Shiinaha 1000V 1500V OEM Customized MC4 Solar Extension Cable oo leh isku xira biyaha biyuhu DC warshad dhedig lab ah iyo alaab-qeybiyeyaal | RISIN
1000V 1500V OEM Lagu Kordhiyay Fiilooyinka Kordhinta Qoraxda ee loo yaqaan 'MC4 Solar Extension Cable' oo leh DC Isku xira Biyuhu (Waterproof) Isku Xidhida Dheddigga
1000V 1500V OEM Customized MC4 Solar Extension Cable oo leh isku xira DC Waterproof Lab Dheddig waxaa loo isticmaalaa nidaamka Solar PV inta udhaxeysa qoraxda iyo Inverter ama sanduuqa xakamaynta. Waxay yihiin iska caabin UV iyo IP68 aan biyuhu lahayn, waxay ku shaqeyn karaan bannaanka 25years. Muhiimad ahaan, Cable Extension MC4 wuxuu noqon karaa OEM dherer iyo cabir kala duwan oo cabir ah sida aad ugu baahan tahay.
Cabirka Cable: 2.5mm2, 4mm2, 6mm2
Xiriir: Isku xira MC4
Danab lagu qiimeeyay: DC 1000V, 1500V
Feature: IP67 Biyuhu, U adkaysi UV
OEM Cable Length: Haa
Nolosha Shaqada: 25sano
Sharaxaadda fiilooyinka fiilooyinka dheddigga ee 'MC4'
1000V 1500V OEM Customized MC4 Solar Extension Cable oo leh isku xira DC Waterproof Lab Dheddig waa labo fiilooyin oo loogu talagalay gaar ahaan isku xirka gudiga qoraxda iyo koontaroolaha lacagta. Qalabka adabtarada waxaa ka mid ah isku xirayaasha MC4 oo hal dhinac ku xira isku xir la'aan xagga qorraxda, iyo silig la soo saaray oo dhinaca kale ah oo si toos ah ugu hogaaminaya xakamaynta lacagta. Qalabkan fiilooyinku wuxuu muhiim u yahay rakibidda qalabka qorraxda ka baxsan, saqafka ama heerka dhulka, waxaana lagu bixiyaa cabbirro kala duwan. Fiilooyinku waa kuwo aan cimilo lahayn oo loogu talagalay inay u adkeystaan ​​kuleylka iyo qabowga daran. Qalabkan fiilooyinku wuxuu ku habboon yahay xirmooyinka Off-Grid-ka oo u dhexeeya 100W illaa 400W.
Kordhinta MC4 waxay bixisaa dherer fara badan, iyo sidoo kale laba cabbir qiyaaso oo kala duwan oo laga kala xusho. Tirada kaladuwan waxay u oggolaaneysaa habeyn ku saleysan baahiyaha gaarka ah ee macaamiisha inta udhaxeysa qalabka korontada ku shaqeeya iyo koontaroolaha.
Faa'iidooyinka Solar PV Wire
·Dahaadhka derbiga labada ah
·Iska caabin aad u fiican UV, saliid, dufan, oksijiin iyo ozone
·U adkaysiga wanaagsan ee xoqidda ·Halogen bilaash ah, olol celin, sumowga hooseeya, ROHS
·Dabacsanaan aad u fiican iyo waxqabadka qaawan
·Danab Sare iyo awoodda qaadista ee hadda jirta
·TUV, CE, ISO waa la ansixiyay
Faa'iidada Isku xiraha Biyaha ee MC4 Solar
Sawiridda Wire4 Extension MC4 (Madow, 1x4mm2, L = 2m, OEM waa la aqbali karaa)
1. Isku xira MC4 Ragga Hogaamiya Kordhinta Dumarka
2. Isku xira MC4 Lab / Dheddig oo loo yaqaan 'Tinned Bare Cable'
3. Isku xiraha qoraxda ee MC4 iyo Anderson Power Connector 50A
4. Isku xiraha qoraxda ee MC4 iyo isku xiraha SAE
5. Isku xira MC4 iyo isku xiraha LP20 Power
Hore: 6 illaa 1 MC4 Splitter Isku Xidhka Guddiyada Qoraxda oo isbarbar socda
Xiga: 2to1 MC4 Y Isku xiraha Iskuxidhka Guddiyada Qoraxda ee isku midka ah ama taxanaha ah